कोरोना भाइरसको सत्य र भ्रम छुट्याउन मुस्किल परिरहेको छ | दर्पण दैनिक
कोरोना भाइरसको सत्य र भ्रम छुट्याउन मुस्किल परिरहेको छ
प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र ७ गते ०५:०६
काठमाडौं शहरमा मानिसहरु डराइरहेका छन, कि सतर्क हुन थाले ? मूल सडकमा सवारी कम गुडेका छन । मास्क लाउनेको संख्या बिस्तारै बढ्दै छ, हात धुने दर बढेको छ, हातमा दल्ने किटाणुनासक रसायनको प्रयोग पनि बढ्यो । एक आपसी भेटका हार्दिकता नमस्कारमा सिमित छ, चोक, गल्ली र पार्कमा देखिने मानिसको पट्यारलाग्दो भिड पातलिएको छ । मास्क, हातमा दल्ने किटनासक रसायन र खाना पकाउने ग्याँस चैं सितिमिति किन्न पाइदैन ।
उपत्यका काठमाडौं छाड्नेको संख्या साबिकमा हुनुपर्ने भन्दा बढी छ । सबै रेडियो, टेलिभिजन र पत्र–पत्रिकाको मुख्य समाचार मात्र होइन तिनको अधिकांश समय र हिस्सा कोरोना भाइरस कै समाचारले भरिएका छन । अझ सामाजिक संजाल भनिने फेसबुक र टुइटर त कोरोनाले नै खचाखच छन, अनगिन्ती अनलाइन पत्रिकाले त मिनेट–मिनेटमा कोरोनाको मुख्य समाचार दिई नै रहेका छन ।
युट्युबमा आउने भिडियोहरु धेरैजसो कोरोना कै छन । मानिसका भेटमा कुराकानी को मूल बिषय पनि कोरोना कै छ । नेपाल मात्र होइन विश्वका थुप्रै देशका सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सतर्कताका निम्ती गरेका कडिकडाउ निर्णय छिन छिनमा आइनै रहेका छन् ।
कोरोनाले भन्दा यसको बारेमा आएका भ्रमपूर्ण समाचारले बढी सताएको छ । असंख्य मान्छेलाई अभिसाप भएको कोरोना भाइरस केहिलाइ बरदान भएको छ । मान्छेलाई आपदको मौकामा चौका पारौला भन्ने ब्यापारी,फेसबूकमा लाइक, कमेन्ट र सेयर कै आशाले भ्रमपूर्ण विचार सुचना तस्बिर दृष्य राख्ने केहि प्रयोगकर्ता , डरलाग्दा समाचार शिर्षक सिर्जना गरेर पाठक ,श्रोता र दर्शक समेटेर समाचार बेच्नेहरु, के ? शिर्षकमा खर्च गरेर कुम्ल्याउने भनेर दाउ खोजेका केहि सरकारी–गैर(सरकारी संस्था अनि सरकारी रकम कै रांइछाई गर्ने बिषय–मौका कुर्ने मुठ्ठीभर सरकारी कर्मचारीलाई बरदान भएको हुने कोरोना लाखौलाख हामी सर्वसाधारणका लागी अभिसाप छ ।
कोरोना भाइरसको सत्य थाहा पाउ त्यो सत्य थाहा बाँडौं, सतर्क रहौं । होसियारी अपनाउ ,इमान्दार र अनुसासित बनौं,कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएका सरकारी निर्णयको पालना गरौँ । हामी सबै आपसमा सहयोगी र इमान्दार भएम भने कोरोनाबाट बच्न सक्छौं । कोरोना बिरुद्धको लडाइमा एकजुट होऔं ।
सञ्चारकर्मी ओम भण्डारीको फेसवुकबाट, लेखक भण्डारी हाल रेडियो थाहा सञ्चार ९९.४ मेगाहर्जमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
पुरुषोत्तम हुमागाईं, चापागाउँ